जाडोवाट तपाईंको घाँटीमा सधै खराब रहन्छ ? यसरी बचाउनुहोस् - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
के तपाईंको घाँटीमा सधै खराब रहन्छ ? यो मौसम परिवर्तनको असर हो भनेर वा खान पानमा आएको परिवर्तनको असर भनेर नबस्नुहोस् । कसरी बच्ने यसबाट ? यो पढ्नुहोस् ।
मौसमको बदला संगै गलामा हल्का खसखस हुनु वा गलमा तिखो घोचाइ महसुश हुनु सामान्य कुरा हो । यो अवस्थामा गलामा खिच खिच हुनु र बोल्नमा समस्या हुनु सामान्य हो । भाईरस वा ब्यक्टेरिय को करणले यो समस्या देखिन्छ । कहिले कही एलर्जी र धुमपानको करणले पनि घाटीमा खश खश हुन्छ । यस्ता धेरै समस्याहरु आँफै समाधान हुन्छन तर केही यस्ता जिद्दी समस्या हुन्छन जो सजिलै जादैनन ।
त्यस्ता समस्यालाई राम्रो उपचारको जरुरी हुन्छ । आमरुपमा मानिशहरू घाटीको खश खस लाई त्यती ध्यान दिदैनन र लापरबाही गर्छन् तर यो समस्या त्यती सजिलो छैन र राम्रो उपचार गरिएन भने गम्भिर समस्या निम्त्याउन सक्छ । घाटीमा आउने खश खस घाटीको इन्फेक्सन हो । जसमा गलामा कर्कश आवाज आउने, हल्का कासो लाग्ने र हल्का ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, गला दुख्ने जस्ता लक्षण देखिन्छन । हाम्रो गलामा दुबैतर्फ टन्सिल हुन्छ जसले धुलो, ब्यक्टेरिया र भाईरशलाई गलामा जानबाट रोक्ने काम गर्छ । तर कहिले कही यो आँफै इन्फेक्टेड हुन्छ र आफ्नो काम गर्न सक्दैन ।
जसलाई टॉन्सिलाइटिस भनिन्छ । जसमा घाटी भित्र दुबैतर्फ टॉन्सिल्स गुलाबी वा रातो हुन्छ । इन्फेक्सन हुँदा यिनिहरु अली ठुला र अली बढी राता हुन्छन । कहिले कही यसमा सेतो कत्ला जस्तो पनि देखिन सक्छ । या यो समस्या उचित देखभाल र एन्टिबायोटिकले निको हुन्छ तर स्ट्रेप्टोकॉक्कस हिमोलिटीकस नामक भाईरसको करणले यो समस्या देखियो भने अलिक गम्भिर हुन्छ । तव यो संक्रमण ह्रीदय र गुदामा पनि फैलिन्छ र गम्भिर हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा नियमित रुपमा नुन हालेको मनतातो पानीले गार्गेलिङ गर्नुपर्छ । गलामा आराम मिल्छ । अदुवा, इलायची र मरिचको चियाले गलाको खश खसमा धेरै आराम मिल्छ । यसमा जीवाणुरोधक गुण पनि हुन्छ र यो चिया नियमित रुपमा सेवान गर्नाले गलामा आराम मिल्नुको साथै गलाको खश खस हराएर जान्छ ।
धुमपान र ज्यादा मसालेदार खानादेखी टाढै रहनुहोस् खानामा बिशेष साबधानी आपनाउनुहोस् । फ्रिज को वा अन्य कुनैपनी चिसो चिजको सेवान नगर्नुहोस् । सधैं मनतातो पानी पिउने गर्नुहोस् । त्यसमा अदुवाको धुलो हल्का मिसाउने र ताजा कागतीको रस १,२ थोपा मिलाउनाले अधिक आरमा मिल्छ । सावधानि नै यो समस्याको मुल हल हो । सधैं धुलो, धुवा र चिसो बाट बच्नुहोस् , राम्रो मास्कको प्रयोग गर्नुहोस् । समस्या देखिनासाथ तुरन्त चिकित्कसको सल्लाह लिनुहोस् ।
सम्बन्धित् समाचार महिनावारी भएका बेला सेक्स गर्न हुन्छ ?
घाँटी खसखस गर्छ ? बेलैमा ख्याल गरौं
घाँटी खसखस भनेको के हो ?
घाँटीमा केहि बिझे जस्तो, चिलाए जस्तो हुने र त्यसैको कारणले खोकी आउने गर्दछ । घाँटीको भित्री भागमा पातलो झिल्ली (mucose membrane) हुन्छ । जसमा स साना नशा पनि जोडिएको हुन्छ । Mucosal glad ले mucose को तरल पदार्थ निकाल्ने गर्दछ जसले घाँटीको भित्री सतहलाई बचाउन कवचको रुपमा कार्य गर्दछ, भने खाना र हावालाई भित्र पुर्याउन सहज भूमिका निर्बाह गर्दछ । mucose को तरल पदार्थ पर्याप्त उत्पादन हुन सकेन भने घाँटी चिलाउने वा खसखस गर्ने गर्दछ ।
घाँटी खसखस गर्नुका कारणहरु :
१ सुक्खा घाँटी
२ धुषित वातावरण (धुलो धुवाँ)
३ धुमपान र मद्यपान
४ बढी मसला र पिरो खानेकुरा प्रयोग
५ संक्रमण (भाईरल संक्रमण, ब्याक्टेरिअल संक्रमण, फुङ्गल संक्रमण)
६ मुटु तथा छातीको रोग (दीर्घ रोगहरु )
७ खानेकुरामा allergy
८ पेटबाट अमिलो पानी आउनु (ग्यास्टिक)
९ घाँटीसँगै अरु अंगमा tumors हुनु
१० अरु शारीरिक कारण नदेखिए मानसिक कारण पनि हुन सक्छ
यीमध्ये हाल घाँटी खसखस गर्नुको प्रमुख कारणमा काठमाडौँमा भैरहेको सडक निर्माणको कारणले देखिएको धुलो धुवाँ, र हाल देखिंदै गएको भाइरल संक्रमण मुख्य हुन् । सीओपीडी, दम तथा मुटुको रोगीलाई धुवाँधुलोको कारणले अरु स्वस्थ जटिलता ल्याउन सक्छ ।